Kenya oo xireysa Xerada Dhadhaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sida ay qortey Wakaaladda Wararka ee AFP Dowladda Kenya ayaa Saxiixdey bishii labaad ee Sanadkan 2019-ka in la xiro Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Waxaana qoraalkaa oo nuqulka mid ah lala Wadaagay Hay’adda Jimciyadda Quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR uu dhigayaa in Xeryaha iridaha la isugu dhufto dhamaadka bisha ogoosto ee Sanadkan 2019-ka.
Kenya ayaa dhowr jeer hore oo sheegtay in ay Xirayso Xeryaha Dhadhaab laakiin Kenya kama aanay dhabaynin iXiritaanka Xeryaha kadib Codsiyo kaga yimi dalalka iyo Hay’adaha qaxootiga daneeya ee Caalamka.
Sababta ay Kenya u xirayso Xeryaha Dhadhaab ayay ku sheegtay khatar amni oo ay ka Cabsiqabto in ay kusoo Dhex-dhuuntaan qaxootiga dagaal-yahanada Al-shabaab ee dagaalka kula jira Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dalalka dhinaca amaanka ka Caawiya ee Kenya ka mid tahay.
Xeryaha Dhadhaab Waxaa Xiligan ku nool qaxootiga tiradiisu Caga-gaynayso 200,000 oo qof oo 98% ah Soomaaliya, Waxaana dadkaa ka mid ah dadka asal ahaan ah Soomaalida dalka Kenya laakiin hore qaxooti ahaan isaga diiwaangeliyay Xeryaha Dhadhaab si ay uga Faa’iidaystaan adeegyada gargaarka ah ee loo fidiyo qaxootiga.